သို့- တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ	Tuesday, 09 February 2016 17:05	သျှမ်းသံတော်ဆင့်	သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန
သျှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးတချို့တို့၏ အလွှဲသုံးစားပြုမှုများအား သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းတွင် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပေးပို့ အပ်ပါသည် ။
သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီမှ မဟာမိတ်တပ်ကို တိုက်တွန်းပေးစေလို	Wednesday, 03 February 2016 11:07	သျှမ်းသံတော်ဆင့်	သို့/ သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှတဆင့်
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများသိစေရန်	Monday, 25 January 2016 13:33	သျှမ်းသံတော်ဆင့်	တာချီလိတ် ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက် မင်းလမ်းဘေးရှိ ဝိန်းကျောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် မဟုတ်ဘဲ သာမန်ဘုန်းကြီးတပါး ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါတယ် ။
မူစယ်လူထု၏ အသက်အိုးအိမ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ	Wednesday, 23 September 2015 15:33	မူစယ်ဒေသခံ	သို့
သျှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ သိရှိစေရန် ထင်ပြအပ်ပါသည်။
ကလေးများ ကျန်းမာရေး စာသင်ကျောင်း များအပေါ် တွင်လည်း အများ အပြားမူတည်	Thursday, 27 August 2015 13:21	ဇေယျာမောင်	သို့ - သျှမ်းသံတော်ဆင့်
မူစယ်မြို့ ပေါ်နှင့် အနီး ကျေးရွာရှိ ကျောင်း များ၏ ကျောင်းဝန်း ၊ ကျောင်းပြင် ၊ ကျောင်းပရဝဏ် အနီး၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားမဝင် တင်သွင်းလာ သော FDA ထောက်ခံ ချက်မဲ့ အန္တရာယ် ရှိ အစား အစာများ ၊ ရောင်းချ နေမှုအပေါ် ကျောင်းကျန်းမာရေး အဖွဲ့ နှင့် တာဝန် ရှိသူတို့မှ တစုံတရာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည် ။
Copyright © 2016 Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.). All Rights Reserved. Feed Entries